Qiso cajiib ah lamaane aad baad ula yaabaysaa | shumis.net
Home » Layaab » Qiso cajiib ah lamaane aad baad ula yaabaysaa
Qiso cajiib ah lamaane aad baad ula yaabaysaa
qiso yaab lehQiso cajiiiiiiiiib ah!! Lamaane ama nin iyo xaaskiisa ayaa waxa ay saarnaayeen markab ay labadooda kudalxiisayeen.Waxaa dhacday in markabkii uu shil kuyimaado oo xagga hoose biyo kasoo galeen uuna billaabay in uu si tartiib tartiib ah uquuso.
Nasiiib wanaag waxa uu watay life-boat ama doon yar oo hal qof oo kaliya ay kubad baadi karto,ninkii ayaa inta uu xaaskiisii gadal iskaga riixay doontii yarayd biyaha kula booday maadaama uu markabku si xawli ah uquusayay!! Xaaskii oo qaylinaysa ayaa markabkii quusayay qarkiisa soo istaagtay oo ninkeedi af labadii ugu dhawaqday!
Aqristow maxaad umalaynaysaa inay kudhahday-waxaad isleedahy inay kutiri ,balaayo kugu dhacday,waad iqayaantay,waan kunecbahy!! Maya waxaas oodhan ma aysan dhihin oo kaliya waxa ay tiri,ninkaygiyoooooooooooooooow.
gabadheeni yarayd ogow,dahabkaygiina meel hebla ayuu kujiraaaaa,hadalkaas kadibna waa ay quustay hooyadii macaanka iyo naxariista badnayd! Ninkii oo hadaladaas maqlayay ayaa oohin isna afka furtay oo banaankii soo bad baaday!! Dulucda sheekada waa in hooyo cid ladaraja ah aysan jirin!!!!
Title: Qiso cajiib ah lamaane aad baad ula yaabaysaa
Posted by Unknown, Published at June 24, 2017 and have 0 comments